Hahatipaky ity tao-2014 iaby antikany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Samy manana ny andraikitra tandrify azy isika tsirairay avy. Natao hizara vaovao izahay eto. Natao hitafatafa miainga amin’izay vaovao hita eo anivon’ny fiaraha-monina izahay.
Taon-dasa tsy tsaroana ?
Ny anjaranay eto dia mizara ny vaovao hita anivon’ny fiaraha-monina ary zaraina amin’ny fitenintsika andavanandro. Sahirana ihany anefa matetika. Ilay fiteny andavanandro toa tsy fampiseho fianakaviana. Ohatra ireo lehilahy manoko daomy mandavan-taona amoron-dalana ireny anie mba henoy e… Mena ny sofinao raha miaraka aman-janaka na zafy ianao. Izany ve no raiamandreny nanabe ny taranaka nandritra ny taona ? Dia ho gaga ve isika raha toa ka ny jiro no tsy misy ka ny maoteran’ny Jirama no nokasaina harehitra hanazava ny alina ? Toa sanatria manao taon-dasa tsy tsaroana izany.
Tsy tsaroana tokoa ny nandorana ny Lapan’ny tanana ny taona 1972. Efa antitra avokoa angamba ireo nandray anjara sy nanatrika izany ka “lojika” ihany raha hadino sahady izany, mainka moa fa efa misy Lapa mijoro eo ka toa tantara sisa ilay trano hotohoton’ny afo. Taon-dasa tsy tsaroana ny nandorana ny Rovan’i Manjakamiadana ka ny resaka fikarohana vola hamitana azy no tena ambetin-dresaka fa tsy izay fananarana ny taranaka.
Fa angaha vitan’izay. Taon-dasa tsy tsaroana ny nandorana ny RNM sy TVM. Tsy ny trano ihany no may amin’ireny fandorana ireny fa ny vakoka raketin’ireny tranom-panjakana ireny. Lova izay tsy afaka nafindra intsony. Indrisy zary toa tsy nisy ireny vakoka ireny.
Izany ve no tadiavina hatao ankehitriny raha mahita an’ireo mihetsika manao herisetra ao Toamasina fa leon’ny delesitazy izy ireo ? Ary ireo nikasa handrefotra ny andrin’ny Jirama, andry izay mitondra ny herinaratra ho an’ Antananarivo ? Mankaleo tokoa aloha ny delesitazy e. Marina izany. Mahasorena. Samy hanana ny fahatsiarovana ratsy haroso eto ny tsirairay vokatry ny delesitazy. Ao ohatra ity lanonana mariazy iray, tapaka ny jiro tsy afaka natao ny “ouverture”. Ho fahatsiarovan-dratsy mandrakizay anie ireny ry Jirama ô. Na maharary tahaka izany aza ny voka-dratsin’ny delesitazy dia aoka re tsy ho atao fanao ity manapotika fananam-bahoaka ity. Omeo hasiny ny fananana iombonana. “Tipaho any ireny fomba raty rolahy” hoy ity havako iray avy any Atsimo any.
Taom-baovao ka fanahy vaovao
Higadona ity ny faran’ny taona 2014. Hiraraka ny fifampiarahabana. “Akory aby iii, arahaba tratry ny farany” hoy ny andaniny tao Antsirabe. “Salama aby, ary samy ho tratry ny lohany e” hoy ny an-kilany mamaly ery ampitan’ny arabe. Firariantsoa ho ren’ny rehetra.
“Fomba fanao tamin’ny mbola tsy nisy faonina izany mikiakiaka izany” hoy ity tovovavy iray. Marina angamba ny azy. Fa rehefa mandeha fiara fitateram-bahoaka ianao amin’izao faran’ny taona izao dia efa maro ireo re mifampirary soa miteny mafy. Mifampizara “progany” indrindra raha amin’ny toerana lafo no haleha. Ataovy an-tsaina tokoa fa miakatra 50 000 ariary ange ny olona iray rehefa hilanona amin’izao faran’ny taona izao. Rehareha tokoa izany mandany volabe izany. Fomba fanao taon-dasa izany. Tsara ho an’izay manana ny enti-manana ny fandaharana re. Taon-dasa tsy tsaroana tokoa angamba fa hita ho miakatra hatrany ny saran’ny fandaniana rehefa hanao fety faran’ny taona tahaka izao.
Tonga ity ny fotoana handrosoana ny firarian-tsoa ho an’iry taona vaovao manangasanga iry. “Samy hahatsipaka ity taona 2014 ity isika iaby. Hitondra ny soa sy ny tsara kosa io taona 2015 io ka hanana fanahy vaovao ny Malagasy tsirairay”. Ho tanteraka tokoa ny fampihavanana ny Malagasy sy ny tantarany. Ho tratra ireo fanetribem-pirenena mangalatra ny harem-pirenena ka ho voasazy eo amin’ny fitsarana fa tsy hanjaka ny fanadivoam-po ivelany. Ho to ny faniriana ka hiarina ny toe-karem-pirenena ary hipaka isam-baravarana izany. Ho voajery ny sosialim-bahoaka. Amin’ny 2015 mifankahita sy “mahita izy” e !